Matongerwo eNyika, 01 Kurume 2016
Chipiri 1 Kurume 2016
ZNCC Inoti Kushaikwa kweMari Kwokanganisa Mabhizinesi
Sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, ZNCC, rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya yemabhizimisi nenyaya yekushaya mari yekunze uye kudhura kuri kuita mitero yekukwereta mari kumabhanga emunyika.
Amai Mujuru Vanoparura Bato Ravo Kune Veruzhinji
Vachitaura nevatori venhau mu Harare neChipiri, Amai Mujuru vati nhaurirano dzekuwumba mubatanidzwa pakati pemapato anopikisa hurumende yeZanu PF pamberi pesarudzo hadzisati dzavepo.
MDC T: Hurumende Ngairemekedze Bumbiro reMitemo Inobata Kutongwa kweMatunhu
Bato reMDC T rinoti rinokatyamadzwa zvikuru nekusaratidza hany’a kwarinoti kuri kuitwa nehurumende yeZanu PF mukuona kuti bumbiro remitemo yenyika raremekedzwa kuburikidza nekupa masimba kumatunhu.
Meya weHarare Oparura Gwaro Rinoburitsa Mamiriro Akaita Guta Iri
VaManyenyeni vanoti pane zvinhu zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa nekanzuru yavo kuitira kuti hupenyu hwevagari vemuguta iri huve nani.
Misoro yeNhau, Chipiri Kurume 01, 2016
VaMugabe Havakwanisi Kumisa Kupesana Kuri muZanu PF?
NeMugovera dunhu reGreat Zimbabwe Monuments kuMasvingo rakave muzinda wemafaro zvichitevera mabiko ekupemberera bhavhadhe remutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe akaitirwa panzvimbo iyi, izvo zvakaita kuti vemamana epedyo neekure vakakoromoke kunodya nekunwa.
VaTomana Voridzirwa Pito Vachinzi Vatadza Basa
Judiciary Service Commission, JSC, inoti gweta guru renyika, VaJohannes Tomana, vanofanira kusiya basa nenyaya yekusatevedzera mitongo yematare epamusoro sezvinodiwa nebumbiro remitemo.
MDC-T Yoshora Danho raVaMugabe Vopa AU Chipo cheMombe Mazana Matatu
Bato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, rinoti riri kushora zvikuru danho rakatorwa nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, rekupa chipo chemombe dzinotsika mazana matatu kusangano re African Union.